Ajaya Dixit | Nepali Stories
Ajaya Dixit – Kathmandu : Tin Bimba Haru
“ठूलोकान्छा, यसपालि त सतबीज छर्न पशुपतिनाथ लगिदे न है !” हजुरआमाले दोस्रोपटक नातिलाई पुकारिन् । हजुरआमाले कुरो गरेको बुझेपछि मोबाइल बन्द गर्दै ठूलोकान्छाले सोध्यो, “के भन्या आमा ?” “सतबीज छर्न लग्दे भन्या !”
“ए भइहाल्छ नि, अघिल्लो दिन बसस्टपमा आएर फोन गर्नु म अफिसबाट लिन आउँला ।”
काठमाडौँमा आन्दोलनका कारण बस नियमित स्थानभन्दा निकै पर रोकियो, सबै यात्रुहरू उत्रिए । हजुरआमा पनि उत्रिइन् । नातिले मोबाइल फोन दिएको थियो र नम्बर थिच्न सिकाइदिएको पनि । बसबाट ओर्लेपछि हजुरआमाले फोन थिचिन् तर लागेन । दोस्रोपटक ‘सम्पर्क हुन सकेन’ भन्ने जवाफ आयो । एकछिन त अलमल्ल परिन् । सँगै छेउमा एक जोडी युवक-युवती उभिरहेका थिए । हजुरआमाले युवतीलाई अनुरोध गरिन्, “ए नानी यो लाग्दै-लाग्दैन, एकपटक हेरदिेऊ न बा !” सँगै उभिएकी युवतीको साथीले सोध्यो, “आमा कता जाने ?…..” “ए हामी पनि त्यतै जाने हो, हामी पुर्‍याइदिउँला, हिँड्नूस् ।” ‘ओहो कस्ता फरासिला रहेछन्’ भन्दै हजुरआमा ट्याक्सीको पछिल्लो सिटमा बसिन् । एकापट्टि केटा र अर्कोतिर युवती बसे ।
हजुरआमाको फोन नआएपछि ठूलोकान्छा छटपटाउन थाल्यो । मोबाइल थिच्दा जवाफ आयो, “स्वीच बन्द गरएिको छ ।” साँझ पर्‍यो तर अत्तोपत्तो भएन । बस स्टप, बसले ओरालेको ठाउँमा पुगे तर हजुरआमा भेटिइनन् । प्रहरीमा रपिोर्ट गर्दा रात अबेर भइसकेको थियो । गह्रौँ मनमा अनेक डर-त्रासका ज्वारभाटा भोग्दै ठूलोकान्छा र साथी घर र्फकंदै थिए । चिसो हुन थालिसकेको राजधानीको बाटोमा बन्द रहेको सटरको बाहिरपट्ट िगुँडुल्किएको एउटा आकृति देखियो र केही नजिक पुग्दा महिला रोएको आवाज पनि सुनियो । यति राती को किन रुँदैछ भन्दै दुवै जना आकृतिछेउ पुगे । चिसोमा काम्दै एउटी महिला रुँदै थिइन् । यत्तिकैमा लोडसेडिङ् सकिएर पिलिक्क बत्ती बल्यो । सटरमाथि बलेको बत्तीको उज्यालोमा आफ्नी हजुरआमा देखेर ठूलोकान्छा अत्तालियो । हजुरआमाले गम्लङ्ग नातिलाई अँगालो हालिन् ।
घर पुगेर खाना खाएपछि हजुरआमाले बताइन्, “ट्याक्सीमा बसेपछि सुइले घोचेकोसम्म सम्झन्छु । त्यसपछि एकैपल्ट त्यो पसलबाहिर आफूलाई पाएँ ।” मोबाइल, कानको मुन्द्रा र ३ हजार ५ सय रुपियाँ लगेछन्, ज्यानचाहिँ बाँच्यो ।
साँझ हुन थालिसकेको थियो । सार्वजनिक सवारीका एउटा पनि साधन थिएनन् र ट्याक्सीहरू पनि सबै भरिभराउ । टाढा पुग्नुपर्ने, स्कुलबाट घर आइपुगेकी छोरी के गर्दै होली, ट्याक्सी पनि छैन, पार्वती चिन्ता मान्न थाली । कुर्नुको अर्थ नहुँदा हिँड्न बाध्य भई ऊ । केहीबेरपछि छेउमा एउटा ट्याक्सी आएर रोकियो, झ्यालको ऐना झार्दै ड्राइभरले सोध्यो, “दिदी कता जाने ?” जवाफै नदिई पार्वतीले ढोका खोली र भित्र बसी । चालकले केही भनेन । गन्तव्य सुनेपछि भन्यो, ठीक छ तर डेढ सय रुपियाँ बढी लाग्छ । पार्वतीले विरोध गर्नुअघि नै ऊ बोल्न थाल्यो, “के गर्नु दिदी ! हिजो दिनभर िकुरेर १० लिटर पेट्रोल भरेको । हिजो दिनभर ित चलाउने कुरै भएन । पाए पनि १० लिटरले के गर्नु ? सानो-तिनो खेती छ, बाआमा किसानी गर्छन् । खडेरी पर्न थालेको छ, खानै पुग्दैन । पढाइ छाडेर यता आएँ, बल्ल ट्याक्सी चलाउने काम पाएँ । लाइसेन्स लिन धेरै पापड बेल्नुपर्‍यो । लुच्चागिरी पाउँछु, राज्य प्रतिनिधित्व गर्नेबाट ठगिन्छु, सुन्ने कोही छैनन् । त्यस्ताको मात्रै कदर भएको देख्छु । बाले भाइको पढाइलाई पैसा पठाइदे भन्छन्, कुन पैसा पठाउनू, छाप्ने मेसिन भए पो ! अब त म पनि इमानदारगिरी छाडेर लुच्चागिरीमा लाग्छु ।” पार्वतीले ढाडस दिने शब्द पनि पाइनँ ।
होटलको पार्किङ् क्षेत्रमा रमेशले गाडीको स्वीच अन गर्दा अरुणदेव चन्द्रागिरीपछाडि निकै अघि लुकिसकेका थिए । होटल परसिरभित्रको बाटो जति चिल्लो थियो बाहिर त्यति नै जर्जर, खाल्डाखुल्डी जताततै । बाटो छेउछाउका एक-दुईवटा घरमा मात्रै इन्भर्टरले बत्ती बालेको थियो । लोडसेडिङ्को अँध्यारोलाई गाडीका हेडलाइटले चिर्दै थिए । क्रसिङ्मा पुग्दा गाडीहरूको तँछाडमछाड थियो । दुई जना प्रहरी जेनतेन प्रयास गर्दै थिए, ट्राफिक व्यवस्थापनमा । दुवै घर जान आतुर भएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । केही दिनअघि ट्राफिकमा कार्यरत एक अधिकारीले एउटा गोष्ठीमा धूवाँ र धूलो खाँदाखाँदा हत्तु भइसकिएको बताएको रमेशले सम्झ्यो ।
आफ्नो पालो नआउन्जेल कुर्नुको विकल्प थिएन । केहीबेरपछि पालो आउने मेसो भएपछि ऊ क्लच थिच्दै, गियर लगाउँदै अगाडि जान तयार भयो । पछाडिका गाडीहरू ट्याँ-ट्याँ र टुँ-टुँ हर्न बजाउन थाले । त्यत्तिकैमा आफ्नो आमाका हात समातेर गाडी छिचोल्दै रमेशको गाडीअगाडि दुई बालक आइपुगे । अघिल्लो बालकले एक्कासि आमाको हात छाड्यो, बु्रसली स्टाइलमा गाडीलाई धम्क्यायो र काता स्टाइल देखाउँदै अघि लाग्यो । बालकको अप्रत्यासित एक्सन देखेर छक्क परेको रमेश, पछिपछि आउँदै गरेको बालकले ठ्याक्क त्यस्तै गरेको देखेपछि त वाल्लै पर्‍यो । हर्न थिचिरहेको पछाडि आउँदै गरेको मिनी ट्रकको गुरुजीले झ्यालबाट घाँटी निकालेर धम्क्यायो, “ओ मिस्टर गाडी अगाडि लाने कि, तान्दिउँ ।”
माथिका घटना यस पंक्तिकारले चिनेकाहरूले राजधानीमा गतसाता भोगेका अनुभवहरू हुन् । हिजोआज यस्ता घटनाहरू धेरै नै हुन थालेका छन्, राजधानी सहरमा । आशा गरौँ, यी विम्ब मात्रै हुन्, हाम्रो राजधानीको परविेश प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । तथापि, जताततै र धेरैथरीले भोग्दै गरेका यस्ता घटनाले भन्न बाध्य गराउँछ, आधुनिकताको यात्रामा हिजोआज हाम्रो नागरकि चेतना ओझेलमा पर्दैछ ।
नेपाल साप्ताहिक ३७१
Posted in Ajaya Dixit
Tagged Ajaya Dixit - Kathmandu : Tin Bimba Haru Ajaya Dixit's Nepali Story Kathmandu : Tin Bimba Haru Literary work of Nepali Story Writer Ajaya Dixit Literatures of Nepali Story Writer Ajaya Dixit Nepali Author Ajaya Dixit Nepali Katha Nepali Katha Kathmandu : Tin Bimba Haru by Ajaya Dixit Nepali Kathakar Nepali Kathakar Ajaya Dixit Nepali Rachanakar Kathakar Ajaya Dixit Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Ajaya Dixit Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Ajaya Dixit Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Kathmandu : Tin Bimba Haru by Ajaya Dixit Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Ajaya Dixit Sahityakar Ajaya Dixit Ka Nepali Katha Haru